Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Qatar Airways dia manana ny ampahefatry ny fiaramanidina Airbus A350
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Qatar Airways dia manana ampahefatry ny fiaramanidina Airbus A350
Qatar Airways dia manantena fa ny Airbus dia nametraka ny fotony ary nanitsy maharitra ny fepetra misy eo amin'ny fahafaham-po an'ny Qatar Airways sy ny mpandrindra antsika alohan'ny handefasana fiaramanidina A350 hafa.
Ny fiarovana sy fiarovana ny mpandeha dia mijanona ho ahiahin'i Qatar Airways voalohany.
Qatar Airways dia miara-miasa amin'ireo orinasa mpampanofa trano rehetra voakasik'ity fitsidihana A350 ity.
Qatar Airways dia efa nandray fepetra hamerenana amin'ny laoniny ny fiaramanidina A330.
Ankoatry ny fanaraha-maso mahazatra azy ireo mba hiantohana ny fiarovana sy fiarovana ny mpandeha sy ny fiaramanidina, Qatar Airways manohy manara-maso akaiky ny fepetra manan-danja manerana azy Airbus Fiaramanidina A350 izay iharan'ny fuselage eo ambanin'ny loko dia miharatsy amin'ny taha hafainganam-pandeha. Ny zotram-piaramanidina dia miara-miasa amin'ny mpandrindra azy mba hiantohana ny fiarovana hatrany ny mpandeha rehetra ary noho io antony io, ary taorian'ny torolàlana voasoratra mazava momba ny mpandrindra azy, dia misy fiaramanidina telo ambin'ny folo miorina ankehitriny, manala azy ireo amin'ny serivisy mandra-pahatongan'ny fotony. apetraka ary misy vahaolana mahafa-po omena mba hanitsiana maharitra ny toe-javatra misy.
Ny fiarovana sy fiarovana ny mpandeha dia mijanona ho ahiahin'i Qatar Airways voalohany. Hanao izay tratry ny ainy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mba hahazoana antoka fa tsy manelingelina ny mpandeha aminy ny fanesorana an-tery ireo fiaramanidina ireo amin'ny serivisy ary hiezaka izy ireo hitady vahaolana hafa hanolorana ny fenitra fanompoana mahazatra mahazatra ho an'ny mpandeha rehetra. Qatar Airways dia efa nanao hetsika hamerenana ny seranam-piaramanidina A330 hiasa miaraka amin'ny vokany eo no ho eo mba hanimbana ny sasany amin'ny fiantraikan'ny fiaramanidina A350 miorina ary ankehitriny dia mitady vahaolana hafa ihany koa.
Ankoatry ny fifantohan'ny zotram-piaramanidina amin'ny fiarovana ny lazany amin'ny fanolorana traikefa avo indrindra amin'ny mpanjifa, Qatar Airways dia miara-miasa amin'ireo orinasa mpampanofa trano rehetra voakasik'ity fitsidihana A350 ity izay nanomboka nijery ny fiaramanidiny voadona.
Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Qatar Airways, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: "Amin'ity fivoarana farany ity dia manantena izahay fa ny Airbus dia hikarakara an'io raharaha io amin'ny fitandremana ilainy. Qatar Airways dia tsy hanaiky zavatra hafa ankoatry ny fiaramanidina izay manohy manolotra ny mpanjifany fari-piarovana avo indrindra sy traikefa tsara indrindra araka ny tokony ho izy ireo. Qatar Airways dia manantena fa ny Airbus dia nametraka ny fotony ary nanitsy ny fepetra misy hatrizay mba hanomezana fahafaham-po ny Qatar Airways sy ny mpandrindra anay alohan'ny handefasana fiaramanidina A350 hafa. ”